“Liverpool kuma guuleysan doonto Premier League xitaa haddii ay 5-0 uga adkaato Man City kulanka Khamiista.”.- – Gool FM
“Liverpool kuma guuleysan doonto Premier League xitaa haddii ay 5-0 uga adkaato Man City kulanka Khamiista.”.-
Byare January 1, 2019
(England) 01 Jan 2019. Liverpool ayaa khamiista u safreysa gegada Etihad Stadium ee kooxda Manchester City kulan ay ku sii dheereysan karto hogaanka horyaalka.
Todobo dhicood ayay Reds iminka ka sareysaa City halka ay sagaal dhibcood dheertahay kooxda Tottenham oo saddexaad ku jirta.
Yeelkeede, Wiilasha Jurgen Klopp kuma guuleysan doonaan Premier League xitaa haddii ay 5-0 ku maraan kooxda Guardiola kulanka la wada sugayo khamiista waa sida uu qabo weeraryahankii hore ee Liverpool Stan Collymore.
“Xitaa haddii ay Liverpool 5-0 uga adkaato Manchester City kulanka khamiista ee Etihad Stadium, weli kooxda Pep Guardiola ayaa ii ah kuwa ugu cad cad inay ku guuleysanayaan Premier League,” Stan Collymore ayaa sidaa ku yiri warbixin uu ku qoray Jariiradda Mirror.
“Haddii ay guushaas uga filaan doonto inay ku guuleystaan horyaalka iyo haddii kalaba, weli waa waqti hore in la sheego.
“Laakiin haddii kooxdeydii hore ay Toban dhibcood oo nadiif ah la timaado dhammaadka bisha Maarso ama horaanta Abriil, intaa kaddib waxaa la arkaa inaan bilaabo inaan aamino oo rumeysto in dhab ahaan ay dhaceyso inay horyaalka qaadayaan.”.
Liverpool ayaa kulanka Khamiista maanka ku heysa inay sii ilaashato rikoodhkeeda guul darro la’aanta Premier League ee kal ciyaareedkan oo ay gaarsiiso 21-kulan oo aan marna dhinaceeda dhulka la dhigin.
Safafka RASMIGA ah ee Arsenal vs Fulham....(Gunners oo dooneysa inay iska dhaqdo Ceebtii ka soo gaartay Liverpool)
“Waan garaneynaa sida loo garaaco Liverpool” - Sergio Aguero